Etu esi wụnye AceStream na Linux ma ghara ịnwụ anwa | Site na Linux
Etu esi wụnye AceStream na Linux ma ghara ịnwụ anwa
Anyị bụ ndị hụrụ egwuregwu n'anya ma na-enweghị ike ịnweta ọwa egwuregwu niile dị ugbu a, na-echekarị nsogbu ihu na ịnụ ụtọ ya, anyị ga-eji ibe dị iche iche na-ebunye ihe egwuregwu n'ịntanetị, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-arịọ wụnye AceStream, nke na-eche na ọ ga-adịtụ mfe iji wụnye na Linux.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-akuzi etu wụnye AceStream na Linux na-enweghị ịnwụ ọnwụnwa, na-enye azịza maka nsogbu ndị kachasị ọsọ taa. Ojiji ya na ọdịnaya ị nwetara bụ oke ọrụ gị.
1 Gịnị bụ AceStream?
2 Etu esi etinye AceStream na Linux
2.1 Wụnye AceStream na Arch Linux na nkwekọrịta
2.2 Wụnye AceStream na Ubuntu na nkwekọrịta
2.2.1 Wụnye AceStream na Ubuntu 14.04 na nkwekọrịta
2.2.2 Wụnye AceStream na Ubuntu 16.04 na nkwekọrịta
Gịnị bụ AceStream?
AceStream Ọ bụ multimedia n'elu ikpo okwu dị ọhụụ, nke ewerela mmeputakwa nke ọdịyo na ntanetị gaa ọkwa dị elu. Maka nke a, ọ mejuputala njikwa njikwa faili ntanetị nke ụwa niile, nke na-eji teknụzụ P2P kachasị elu, na-ekwe nkwa nchekwa data na usoro nnyefe dị mma.
Sọftụwia Ace Stream na-enye anyị ọtụtụ uru anyị nwere ike ịkọwapụta:
Ohere nke ikiri mgbasa ozi n'ịntanetị (TV, iyi ọdịnala, ihe nkiri, katuunu, wdg), nwere ogo dị elu na ogo ihe oyiyi.
Na-ege ntị music online na a format na-adịghị ida ọ bụla àgwà.
Ele iyi online, na-enweghị na-eche ya ka ya n'ụzọ zuru ezu ibudata.
Lelee ọdịnaya na ngwaọrụ ndị dịpụrụ adịpụ (Apple TV, Chromecast, wdg) na usoro nkwukọrịta dị ka airplay, Google Cast na ndị ọzọ.
Enye ohere mwekota na dị iche iche ngwa.
Etu esi etinye AceStream na Linux
Iji wụnye AceStream na Linux anyị ga-agbaso usoro dịgasị iche iche dabere na distro ị na-eji, anyị ga-elekwasị anya na Arch Linux na Ubuntu, mana anyị nwere olile anya n'ọdịnihu ịwụnye ya na distros ndị ọzọ.
Wụnye AceStream na Arch Linux na nkwekọrịta
Isi ihe mere m ji mee isiokwu a bụ n'ihi na ọtụtụ ndị nwere nsogbu ịwụnye AceStream na Arch Linux, Antergos, Manjaros na nkwekọrịta, isi ihe kpatara ya bụ na pkgbuild nke ngwa mgbakwunye acestream-mozilla-ngwa mgbakwunye Ọ na-enye njehie mgbe ị na wụnye, ihe ngwọta dị oke mfe.
Anyị na-aga ịwụnye acestream-mozilla-ngwa mgbakwunye nke gwakwara anyi engine acestream y acestream-ọkpụkpọ-data kedu ihe ngwungwu achọrọ iji mụta nwa AceStream si na firefox.
Nke mbu, anyi aghaghi imeghe onu ma mezu iwu a:
Ọ ga-edozi nsogbu nkwenye nke na-egbochi ịwụnye ndabere nke dị mkpa iji wụnye acestream-mozilla-ngwa mgbakwunye.
Mgbe ahụ, anyị mechie iwu na-esonụ
N'oge a ga - ajụ anyị ma anyị achọrọ ịwụnye nkwenye dịgasị iche iche, anyị ga - asị ee niile.
Wụnye AceStream na Ubuntu na nkwekọrịta
Wụnye AceStream na Ubuntu 14.04 na nkwekọrịta
Maka ndị ọrụ nke ubuntu na ihe nrụpụta ruo na nsụgharị 14.04, ntinye nke AceStream ga-adị mfe, ha ga-eme iwu ndị a site na njedebe:
ikwughachi 'deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ ntụkwasị obi isi' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/acestream.list sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key tinye - sudo apt-nweta melite sudo apt-nweta wụnye acestream-full
Wụnye AceStream na Ubuntu 16.04 na nkwekọrịta
Ndị ga-alụ ọgụ ntakịrị karịa bụ ndị ọrụ nke Ubuntu 16.04 na ihe nkwekọrịta ebe ọ bụ na acestream enweghị nkwado maka ụdị a, mana ekele maka nke a ederede, M jisiri ike wụnye ya.
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ibudata ma wụnye ụfọdụ ịdabere na ị gaghị enwe ike ibudata na ụlọ ọrụ gọọmentị, jide n'aka na ịwụnye ndị kwesịrị ekwesị maka ụlọ nke distro gị:
Budata ma wụnye libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb ị nwere ike ime ya na njikọ ndị a: http://launchpadlibrarian.net/216005292/libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb
Ibudata ma wụnye n'usoro nke egosiputara ndi a: acestream-player-compat_3.0.2-1.1_amd64.deb; acestream-engine_3.0.3-0.2_amd64.deb; acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb; acestream-player_3.0.2-1.1_amd64.deb Nwere ike ibudata nke ọ bụla na njikọ ndị a: https://drive.google.com/folderview?id= … e_web#list
Budata ma wụnye libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_i386.deb ị nwere ike ime ya na njikọ ndị a: http://launchpadlibrarian.net/216005191/libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_i386.deb
Ibudata ma wụnye n'usoro nke egosiputara ndi a: acestream-player-compat_3.0.2-1.1_i386.deb; acestream-engine_3.0.3-0.2_i386.deb; acestream-player-data_3.0.2-1.1_i386.deb; acestream-player_3.0.2-1.1_i386.deb Nwere ike ibudata nke ọ bụla na njikọ ndị a: https://drive.google.com/folderview?id= … e_web#list
Ọzọ anyị ga-aga n'ihu na ntinye nke AceStream dị ka anyị mere maka mbipute 14.04, mepee ọnụ ma mepụta:
N'ọnọdụ ụfọdụ ọ dị mkpa ịmalite ọrụ ahụ acestream-engine.service, maka nke a, anyị na-eme iwu ndị a site na ọnụ:
systemctl bido acestream-engine.service systemctl nyere acestream-engine.service aka
Site na nkuzi a, anyị nwere olile anya na ị ga-anụ ụtọ nnukwu usoro mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-eji ike niile nke teknụzụ P2P.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Etu esi wụnye AceStream na Linux ma ghara ịnwụ anwa
Ihe 41 kwuru, hapụ nke gị
Ọ dị mma na post ma ọ dịkarịa ala na archlinux ma nke a bụ ikpe m ịchọrọ: "systemctl bido acestream-engine.service" na "systemctl enable acestream-engine.service" ka ọ rụọ ọrụ.
Zaghachi Julio Cesar Campos
Were na-anwale ya site na Firefox, ka ị na-eji ihe nchọgharị ọzọ?
Onwere onye maara ka esi eme ya ka ọ rụọ ọrụ na Debian 9?
Zaghachi na UserDebian
Firefox na archlinux
Amaghị m ma ọ bụrụ na e bipụtara okwu m gara aga ... M na-ekpeghachi! Ọ na-ewe Amaghị m awa ole na-eme iwu ahụ na-adịghị mma na njedebe, yana nke m tinyere-enweghị nkwenye, na njedebe ọ naghị arụ ọrụ !!
ọzọ post na-abaghị uru!
nwụnye nrụnye na Manjaro
Ezigbo m na ọ rụghị ọrụ maka gị, ọ rụ ọrụ zuru oke maka m, agbanyeghị gbalịa imezu iwu 2 ndị a:
"Systemctl bido acestream-engine.service" na "systemctl enyere acestream-engine.service"
M jisiri ike mee usoro niile na enweghị nsogbu. Mana mgbe m na-achọ ịmalite ọrụ site na ọnụ ya nyere m ọdịda abụọ;
systemctl bido acestream-engine.service
To malite acestream-engine.service: Unit acestream-engine.service ahụghị.
systemctl enyere acestream-engine.service aka
Okpu ịrụ ọrụ: Enweghị faịlụ ma ọ bụ ndekọ dị otú ahụ
Otu ihe ahụ mere m. ọnụ na-akwado m iwu ndị ahụ na ọdịda ndị ahụ.
Daalụ nke ukwuu maka post! Ọ bụrụ na ị jiri Ubuntu 16.10 64 ibe n'ibe ị gaghị enwe ike iwunye "acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb". Ha ga-ebu ụzọ budata ma wụnye nchịkọta ndị a:
Eleghị anya, achọrọ ụfọdụ ndabere ndị ọzọ dị na mpaghara ahụ.
Zaghachi Juan M
Acestream-mozilla-plugin akwụsịla ịrụ ọrụ na Firefox 52, dị ka ọtụtụ plugins NPAPI ndị ọzọ.
Nhọrọ ọzọ dị mma ma dịkwa mfe bụ iji docker wee bụrụ agnostic nke sistemụ arụmọrụ gị. Iji nnabata, ị nwere ike mụta nwa-
Edeela m obere nkuzi na akwukwọ, iji kwado ogbugbu.
David Martin dijo
Na akụkụ nke ịwụnye ya na Ubuntu 16.04, mgbe ị na-ekwu ibudata ma wụnye faịlụ ndị ahụ, kedu ka esi etinye ha? Mgbe m na - ebudata ma wepu ha, ụfọdụ bụ naanị faịlụ libreoffice na ndị ọzọ, amaghị m otu esi etinye ha.
Daalụ n'ọdịnihu na ekele.
Zaghachi David Martín
Ma igodo ahụ anaghị arụ ọrụ ọzọ, ma ọ bụ enwere mperi na nchịkọta, mana na arch na manjaro ọ gaghị ekwe omume ịwụnye ya.
Mgbe ị na-anwa ịwụnye ịdabere (qwebquit) ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ, ọ na-abanye na akaghị ma ọ nweghị ụzọ.
Ọ dị onye chọtala azịza ya?
Ndewo, maka nwụnye na Linux Linux ị ga-emerịrị ihe ndị a:
-Wụnye ngwugwu 'acestream-launcher' site na yaourt site na 'yaourt -S acestream-launcher' (ngwugwu nke anyị ga - enyere ndị ọzọ aka ibudatara gị ozugbo)
-Enable acestream-engine.service, anyị na-abanye ọnụ ya na ọnọdụ mgbọrọgwụ anyị na-etinye ihe ndị a
-systemctl bido acestream-engine.service
-systemctl enyere acestream-engine.service aka
M maliteghachiri kọmputa mgbe nke a gasịrị, amaghị m ma ọ ga-adị mkpa ma ọ bụrụ na ọ ga - adị
-Nke a ezuola mana na mmelite Arch ikpeazụ ha agbagọla ihe ọ naghị arụ ọrụ, yabụ ha lere anya maka ihe ga-adịru nwa oge, nke bụ ibudata faịlụ, ọ bụ ihe ndị a:
Isi: https://aur.archlinux.org/packages/acestream-launcher/ (na kwuru)
ozugbo ebudatara, anyị na-aga na njedebe ma gaa na nchekwa ebe anyị ebudatara ya,
Anyị na-aga n'ihu ịwụnye ya na 'sudo pacman -U python2-m2crypto-0.23.0-2-x86_64.pkg.tar.xz' na ọ bụ ya, ọ kwesịrị ịga, oge mbụ ọ na-aga n'ihi na m pịa oge nke abụọ, oge mbụ mgbe niile na-enye njehie, nke ahụ niile
PS: dokwuo anya na sudo pacman -U ma obughi -S n'ihi na obu ngwugwu mpaghara nke enwetara na makepkg
Daalụ maka mmasi gị.
Agbalịrị m ọtụtụ oge na amaara m ndị ịdabere na ya, na ihe ndị na-ekwu banyere nchịkọta na ntinye na yaourt site na obi. Aga m agbaso ndụmọdụ gị na onye na-ebido mmiri wee hụ ma m nwere ihu ọma. Aga m agwa gị.
Ana m emeghachi ekele m
Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ọ naghị arụ ọrụ. Agbalịrị m njikọ ahụ ị tinyere na nkọwa, mana ọ naghị edozi ya, ọ na-amata njikọ ahụ, ọ na-enye m nhọrọ ịhọrọ mmemme ahụ, m na-ahọrọ acestream-launcher mana VLC anaghị emepe.
Na nkasi obi ọ na-enye m azịza na-esonụ.
Faịlụ «/usr/lib/python3.6/site-packages/psutil/init.py », akara 1231, na _send_signal
Anyị ga-echere mmelite ọhụrụ.
Mgbe melite ọhụụ, azịza na njikwa bụ ihe ndị a.
Acestream engine na-agba ọsọ.
2017-07-28 18: 16: 59,615 | MainThread | acestream | njehie n'oge mmalite
Traceback (kacha na-adịbeghị anya oku ikpeazụ):
Faịlụ «core.c», akara 1590, na
Faịlụ «core.c», akara 144, na
Faịlụ «core.c», akara 2, na
ImportError: enweghị ike mbubata aha __m2crypto
Njehie na-egosipụta maka Acestream!
Media Player anaghị agba ọsọ ...
Anyị na-emeziwanye, ugbu a ọ ghọtara acestream, mana libcrypto na-aga n'ihu ịlụ ọgụ.
Agbalịrị m ịwụnye ngwugwu ị kwadoro na njikọ ị zitere m.
Ọ na-edozi nsogbu ahụ n'ụzọ dị irè, vlc meghere na ọrụ Acestream.
Daalụ maka enyemaka gị-
Ndewo, nwute maka igbu oge, ọ bụ ihe ijuanya na ọ rụghị ọrụ gị mgbe ọ mere, a nọ m na plasma Arch, enwere m obi ụtọ na ọ nyeere gị aka, nke ahụ bụ maka anyị
Na nkesa ọzọ m nwere nke bụ Fedora, ihe m nwere bụ Mmanya na-eulatingomi acestream maka windo xD, ọ bụrụ na ị gaa distro ọzọ ma ọ bụ Arch n'onwe ya, ihe na-eju m anya bụ na ọbụnadị na Debian ha nwere nchịkọta ndị a ...
Ndewo na faịlụ ahụ bụ otu esi etinye ya, m ka bụ onye ọhụụ, ekele
Ọ na-etinye ya na nkọwa dị n'elu
Nyaahụ m arụnyere ya dị ka snap ngwugwu na Kde Neon 5.8 na ọ tụrụ m n'anya na ọ dị mfe na ngwa ngwa ọ na-arụ ọrụ maka m. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị melite isiokwu ahụ n'ihi na enweghị ntụnyere, a na-eme ka usoro a dị mfe.
sudo apt wụnye snapd → wụnye snap package management system (ma ọ bụrụ na ịnweghị ya arụnyere)
snap chọta acestream → iji chọpụta na anyị nwere mmemme na repositories (ihe niile ndị ubuntu niile kwesịrị ịnwe ya)
sudo snap wụnye acestreamplayer
Antonio Manzano dijo
Ị nwetara ya. M nnọọ arụnyere na kubutu 17.10, ebe ọ bụ na usoro na-egosi ebe a bụ kpam kpam unfeasible. Daalụ nke ukwuu
Zaghachi antonio manzano
adabaghị maka i386 ije
Ọ bụ naanị ụzọ m ga-esi wụnye ya na Lubuntu 16.04.4, mana ọ nweghị ụzọ m ga-esi chekwaa faịlụ nhazi ahụ yana achọrọ m ịhazi oke iji rụọ ọrụ n'akụkụ Serviio. Ọ bụla echiche idozi ya?
Dị ezigbo mma post A ga-agụ web peeji nke Linux newbies.
Zaghachi José Antonio
pita the rookie dijo
Kedụ ka ị ga - esi wụnye ya maka AntiX 16 (ọ bụ nkesa Linux)?
Agbalịrị m dị ka Arch Linux na nkwekọrịta, mana m bụ ọhụụ ọhụụ na m ga-enwerịrị ya
Zaghachi rookie pita
Ndewo, na ngwugwu ọnya, nke onye ọrụ ibe anyị kwuru na ịza ajụjụ, ọ dịla mfe ọ bụghị naanị maka nkesa ndị a kamakwa maka ọtụtụ. Ihe nkesa ndị kwekọrọ na nchịkọta ndị a dị ebe a:
Na Debian ọ ga - abụ ndị a:
-sudo dabara adaba snapd
-sudo snap wụnye isi
-sudo snap wụnye acestreamplayer
Na Igbe na nkwekọrịta:
-sudo systemctl enable-ugbu a snapd.socket
Na Arch (plasma) aghaghị m ịmalitegharị ka nchịkọta ndị arụnyere na-apụta, ọ bụrụ na ọ pụtaghị na ị maraworị ihe ị ga-eme.
Na ubuntu na ihe ndi ozo echere m na o dika onye ya na ya rụnyere ya n’elu ihe KDE neon kwuru.
Ọ bụ ihe ijuanya na na Gnome na Debian ọ dị oke njọ ma ọ naghị ejikọta nke ọma na GTK mana na plasma Arch ọ na-agbakọ nke ọma, ihe dị mkpa bụ na a na-ahụ ya na mpụga nke aesthetics.
ihe a na-etinye gị acestream-engine?
Ọ bụghị m
Ndewo, ee e, ọ naghị etinye ya, ma ọ dịghị mkpa ya, na ngwungwu snap niile ndị dabere na kpuchielarị, ọ ga-arụ ọrụ ee ma ọ bụ ee.
Ndewo Alejandro, lee ma ị nwere ike inyere m aka
[txuber @ manjaro ~] $ sudo systemctl enable –now snapd.socket
Toghara ime nke ọma: Unit file \_ xe2 \_ x80 \_ x93now.service adịghị.
na manjaro Manjaro XFCE Edition (17.0.4) x64
Ndewo, Manjaro bụ na ọ bụghị ọcha Arch na ihe ahụ nwere ike ịgbanwe ntakịrị, ọ ga-ekwe omume na enyerela ya aka na ọ dịghị mkpa ịme ya, echere m na ị gbalịrị ịhapụ usoro ahụ ...
Ozugbo arụnyere ihe ị ga-eme? N'ihi na agbanyeghị ọkpụkpọ-ọkpụkpọ, amaghị m otu esi eme ka ọ rụọ ọrụ.
Onwere onye nyere m aka biko?
Ọ bụrụ na ihe ị rụnyere bụ acestream-launcher, mgbe ịpịrị njikọ njikọ acestream ga-ajụ gị ngwa ọ bụla ịchọrọ ịmepe njikọ ahụ, ị ​​na-agwa ya na VLC, nke a bụ nke ga-arụ ọrụ nke ace-player
Ndewo. Nke mbu, ana m ekele gi nke ukwuu maka enyemaka gi. M na-ekwu. Ewunyela m ngwugwu acestream snap na Debian 9 na gnome. Mgbe na arenavisión, nke bụ ihe m chọrọ maka ya, m pịa njikọ acestream na windo na-egosi nke na-enye m nhọrọ abụọ, nke mbụ bụ acestreamengine na ọ bụrụ na m pịa nke a, ọ nweghị ihe ọ bụla na nke abụọ bụ ịhọrọ ngwa ọzọ, ana m enye ya ịhọrọ ma ngwa awụnyere adịghị emeghe, folda ụlọ m ga-emepe, yabụ na amaghị m otu esi ahọrọ vlc.
Na acestream-launcher ọ naghị aga nke ọma, ị ga-akawanye wụnye ngwugwu Snap ka m na-akọwa n'olu m n'elu.
Ana m anwa ịwụnye ngwugwu snapd, mana ọ gaghị ekwe m:
sudo apt wụnye snapd
E: Enweghị ike ịchọta ngwugwu snapd ahụ
ihe m na-eme?
Ana m ekele gị nke ukwuu, ọ bụ otu n'ime mmemme m jiri na windo na achọrọ m ịnwe na Linux
Daalụ Chemabs na Alejandro! Zuru oke na Ubuntu 17.10
snap chọta acestream
Ma nke ahụ bụ ya!
Ihe dị ịtụnanya bụ na ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ma ha zitere gị post na nnọkọ ha site na 2014! Na nke ha na-ekwu maka Ubuntu 13.04!
Marco Barria dijo
ezi, dị ka ha na-ekwu na ihe ndị gara aga ọ na-arụ ọrụ zuru oke na snapd na arch:
sudo systemctl enyere snapd.socket
Zaghachi marco barria
hello, odikwa uzo esi etinye uzo iyi na-abughi onye mmemme ... dika esi eme na windo
Zaghachi ka mchavez
Uber site na njikwa na Uber CLI
Zute Lila HD isiokwu isiokwu dị mfe